Ahoana no ho Lasa heloka Bevava ny Mpisolovava
Heloka bevava ny mpisolovava, fantatra ihany koa ho toy ny heloka bevava ny fiarovana ny mpisolovava sy ny vahoaka mpiaro, hiaro ny tsirairay, fikambanana, sy ny sampana izay voampanga noho ny heloka bevava. Heloka bevava ny mpisolovava hiatrehana isan-karazany spectrum ny heloka bevava, miainga avy amin’ny herisetra ao an-tokantrano ny heloka bevava, ny firaisana ara-nofo ny heloka bevava, heloka bevava herisetra sy ny zava-mahadomelina sy ny heloka bevava ny fiara eo ambany fitarihan’ny (DUI), ny halatra, ny fanodinkodinana, sy ny hosoka. Ity resadresaka miaraka amin’ny heloka bevava mpisolovava manome antsika hahatakatra ny iray amin’ireo heloka bevava mpisolovava ny asa lalana sy ny fanao isan’andro. Toy ny mpahay lalàna, amin’ny heloka bevava ny mpahay lalàna rehetra dia tsy maintsy mahazo ny mari-pahaizana momba ny lalàna sy mizara ny fisotroana fandinihana ao amin’ny fanjakana izay mikasa ny fanao. Ny sasany heloka bevava mpisolovava mahazo ny solaitrabe ny taratasy fanamarinana avy amin’ny Birao Nasionaly ara-Dalàna Manokana Fanamarinana (NBLSC). Ny NBLSC dia fikambanana tsy mitady tombontsoa deraina ny American Fisotroana Fikambanana mba hanome birao fanamarinana ny mpisolovava sy ny outgrowth ny Birao Nasionaly ny Fitsarana Advocacy. Heloka bevava ny mpahay lalàna misolo tena ny voampanga miatrika fanenjehana noho ny heloka bevava ao amin’ny fanjakana, federaly sy ny fitsarana ambony. Ny lenta fampiharana dia ahitana andevo ny fahafahana vonjimaika ny fandraisana fitenenana, fiangaviana bargains, ny fitsarana, ny fisintonana am-bavany (parole na ny fisedrana), dia miantso sy taorian’ny faharesen-dahatra fanafody. Ao anatin ny mpisolovava ny asa ny asa, ny heloka bevava mpahay lalàna dia: ny heloka Bevava mpisolovava tsy maintsy ho tsara am-bava sy an-tsoratra ny fiarovana ny fahaiza-manao mba milaza ny mpanjifa ny raharaha eo anatrehan’ny mpitsara sy ny handresy lahatra ny mpitsara. Fanadihadiana sy ny fikarohana ny fahaiza-manao dia zava-dehibe ihany koa eo amin’ny fanorenana ny mpanjifa ny raharaha sy ny fametrahana fiarovana mafy. Heloka bevava ny mpahay lalàna dia tsy maintsy ihany koa mahery vaika creative fisainana sy ny fandalinana ny fahaiza-manao mba hampivelatra ny paik’ady ara-dalàna, handinika ny raharaha ny lalàna sy ny litigate complex toe-javatra. Heloka bevava ny mpahay lalàna dia tsy maintsy koa ny amin’ny fahatakarana lalina ny fanjakana, federaly sy ny fitsipika ao an-toerana, ny fombafombam-pitsarana, evidentiary lalàna sy ny eto an-toerana mpitsara hamakivaky ny rafi-pitsarana heloka bevava mahomby sy ny pahombiazana izy. Ankoatra izany, tsara fifandraisana amin’ny fahaiza-manao ilaina mba hanorenana mafy ny mpanjifa-ny mpampanoa lalàna, fifandraisana. Voampanga dia finicky vondrona izay indraindray mandalo maro ny mpahay lalàna alohan’ny handaminana ny iray tiany. Noho izany, ny fahafahana hisarika sy hitana ny mpanjifa dia zava-dehibe ho miroborobo ny heloka bevava ny fiarovana ny fampiharana. Ny ankamaroan’ny heloka bevava mpisolovava miasa amin’ny tsy miankina no fomba fanao, na amin’ny ny solo mafy. Sasany miasa ho an’ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra ny sampan-draharaha na ny governemanta araka ny vahoaka mpiaro.
Izy ireo matetika hihaona amin’ny mpanjifa ivelan’ny ny birao ao amin’ny lapan’ny fitsarana, fonja, ny hopitaly sy ny toerana hafa. Ny ankamaroan’ny heloka bevava mpisolovava foana ny eo an-toerana manao. Na izany aza, ho an’ny heloka bevava mpisolovava amin’ny nasionaly amin’ny fampiharana, matetika lavitra no takiana. Heloka bevava ny mpisolovava karama mitovy, miankina amin’ny habeny sy ny sehatra ny fomba fanao, ny clientele ny mafy manompo sy ny toerana ara-jeografia ny mafy. Bahoaka mpiaro sy ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra ny karama dia matetika tsotra (ny dolara dolara, isan-karazany dia mahazatra). Heloka bevava ny mpisolovava miasa amin’ny lalàna orinasa amin’ny ankapobeny dia mahazo ny ambony indrindra ny karama za-draharaha mpanao heloka bevava mpisolovava afaka mahazo tsara ho any an-enina olo-malaza. Ny karama ambony indrindra ny heloka bevava mpisolovava matetika ireo izay misolo tena avo lenta, mpanan-karena voampanga amin’ny avo-tsatòka toe-javatra. Maro ny heloka bevava mpisolovava manomboka ny asa amin’ny maha mpampanoa lalàna na ny vahoaka mpiaro. Mpiaro ny vahoaka dia ny mpisolovava notendren’ny fitsarana hisolo tena ny voampanga izay tsy manam-bola ny mpahay lalàna. Sarintsarim-pitsarana sy ny moot fitsarana traikefa amin’ny sekoly fianarana lalàna dia manampy toy izany dia mamela ny mpisolovava mba hampitombo am-bava fisoloana vava hahazo fahaiza-manao sy ny fizahan-toetra ny traikefa eo amin’ny iray milalao ny fametrahana.
Heloka bevava ny lalàna dia tsy mitsaha-mitombo fanao akany
Toy ny tahan’ny heloka bevava sy ny heloka bevava ny lalàna izay no miakatra, ny isan’ny olona voaheloka higadra efa nitsangana efa ho avo telo heny nandritra ny taona. Ny tahan’ny heloka bevava efa nitombo, ary ny mponina any am-ponja dia mipoaka manerana ny firenena. Toy ny vaovao heloka bevava ny lalàna dia hazavaina kokoa ny Amerikana dia voampanga ho ao ambanin’ny fanjakana, ary ny lalàna federaly, ny mila ho an’ny heloka bevava mpisolo vava mba hiaro ny voampanga ihany koa hitsangana
NY TORO-HEVITRA NY MIARAMILA MPISOLOVAVA